KU SAABSAN US - Qalabka Ciyaaraha Haiber (Shanghai) Co., Ltd.
Ciyaar Gudaha ah
Qaab Ciyaareed jilicsan
Taallada jilicsan ee la taaban karo
Koorso Junja Ninja ah
Ciyaar jilicsan oo jilicsan
Ciyaar socod baradka
Ciyaarta jilicsan ee Ciyaarta
Ciyaar jilicsan oo jilicsan oo Combo ah
Ciyaar wadaag ah
Ciyaaraha Ku Saabsan Isdhaxgalka
Qalabka Ciyaaraha Haiber (Shanghai) Co., LTD, oo leh khibrad 21 sano ah garoon ciyaareed, wuxuu u adeegay shirkado badan oo guryaha sida Wanda, Wanke, Evergrande real estate, iyo shirkado kale oo caan ah oo horumariya dhismaha Shiinaha, iyo shisheeye badan oo shisheeye oo gudaha ah ka ciyaar xarumaha fikradaheena ugu fiican iyo tayada.
Si loo siiyo la-hawlgalayaasha caalamiga ah xagga qorshaynta, qaabeynta, cilmi-baarista iyo horumarka, soo-saarka, dhismaha, hawlgalka, illaa adeegga iibka ka dib warshadaha madadaalada gudaha ah ee xalka buuxa leh.
Kooxdayada naqshadeynta caalamiga ah, iyada oo loo marayo naqshadeynta hal abuurka, oo lagu daro alaabooyinka jilicsan ee jilicsan ee jilicsan, iyada oo loo marayo naqshada hal abuurka, waxay gelisaa dhammaan noocyada qalabka isboortiga isboorti ee leh macaamiisha dhulkooda, jebi xadka booska, gaarista midnimada booska iyo qaabka qalabka.
Haiber naqshadeynta waxayna dhistaa garoon gudaha lagu ciyaaro si adag oo waafaqsan heerarka amniga Yurub iyo Mareykanka. Waxay dhaaftay heerka ASTM ee Mareykanka, heerka EU ee Yurub, iyo heerka AU ee Australia. wuxuuna kaqaybqaatay samaynta qeexida farsamo ee amaanka koowaad ee qalabka madadaalada jilicsan ee Shiinaha. Heerarkan sidoo kale annaga ayaynu ku fulin doonnaa faahfaahin kasta laga bilaabo r& d illaa soosaarka iyo rakibaadda.
Qolka 1912, No.819, Wadada Yinxiang, Magaalada Nanxiang, Degmada Jiading, Shanghai
Su'aalaha ku saabsan badeecadaheena, fadlan noogu soo dir emaylkaaga annagana waan la soo xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.